Archive du 20180411
Taksibe eto Antananarivo Hiakatra 700 Ar ny saran-dalana
Nanao fanambarana teny Ambodivona omaly ny Fikambanan’ny Koperativa Fitaterana an-drenivohitra sy ny manodidina (UCTU). Hiakatra 700 Ariary ny saran-dalana manomboka amin’ny alarobia 25 aprily ho avy izao, hoy Randrianatoandro Lova filohan’ny UCTU.
Fitondran’ny HVM Nahitana vehivavy maro nanondrana
Malaza sy hiadiana, saika maneran-tany ny fitovian-jo eo amin’ny lahy sy ny vavy. Mihazakazaka amin’izany ny eto Madagasikara. Efa hita ny fidirana an-tsehatry ny vehivavy eo amin’ny sehatra politika na mbola somary vitsy ihany aza.
Antenimieram-pirenena Tsimbazaza Depiote 20 amin’ny 151 no mivory sisa
Solombavambahoakan’i Madagasikara latsaky ny 20 isa no tonga nanatrika ny fivoriana nitambarambe nandaniana ny volavolam-pandaharam-potoana ny alakamisy 5 aprily ka hatramin’ny alatsinainy 12 aprily 2018 natolotry ny diniky ny filoha omaly 10 aprily.
Fisandratana maneso 2030!
Mikorontana ny firenena! misavoritaka ny saim-bahoaka! Inona indray no hatao amin’ity fanambaran’ny mpitatitra milaza ny hampiakatra saran-dalàna ity? Inona no ho vahaolana petatoko na vono afo ataon’ny fitondrana HVM eo anatrehan’ny zava-misy?
Lalàna mifehy ny fifidianana Nanara-drenirano fotsiny ny senatera
Nitranga ny efa nampoizina. Lany tsy nasiam-panovana teny amin`ny Antenimierandoholona omaly ireo volavolan-dalàna fehizoro mifehy ny fifidianana. Loholona 53 no nanaiky ary iray monja no nandà. Tsy nisy ny fanovana na fanitsiana nataon’ny senatera fa nijanona amin’ilay endriny nandanian’ny Antenimierampirenena azy ihany.
Madagasikara Anaty krizy ara-drafitra tanteraka
Mikorontana tsy mandeha amin’izay laoniny intsony ny raharaham-pirenena, fa tratry ny krizy ara-drafitra. Tsy misy azo antenaina amin’ny fahefana mpanao lalàna fa dia ny fizarana malety sy ny resaka kolikoly no malaza.
Rivo Rakotovao Efa mahay noho ny Bianco ?
Azo raisina ny fitorian’ny solombavambahoaka manoloana ny fitoriana noho ny resaka kolikoly goavana tamin’ny fampandaniana ny lalàna mifehy ny fifidianana, hoy ny Bianco.
Fanarenam-pirenena Mihetsika ny Katolika
Latsaka an-katerana tanteraka sy tafahitsoka tanteraka ao anatin’ny fahantrana ny firenentsika. Miara-miaina izany isika rehetra, ary samy manam-paniriana ny hitondra fanovana, hoy ny fanambarana lehibe nataon’ny fikambanana Katolika K3F (Komitin’ny Fahamarinana-Fandriampahalemana-Fiadanana) tao amin’ny Lapan’ny Kilonga ao amin’ny Saint Jean Vianney Ambalapaiso Fianarantsoa omaly.
Haino aman-jery manohana fitondrana Avy aiza ny volabe nananganana azy ireo ?
Mitombo isa hatrany ireo haino aman-jery niforona tamin’ ity taona 2018 ity. Ho an’ ny televiziona manokana dia mahatratra 15 izy ireo ankehitriny raha 12 tamin’ny taon-dasa. Marihana fa ny 85% amin’izy ireo dia manohana fitondrana avokoa.
Vovoka fotsy nanempotra mpianatra Mandeha ny fanadihadiana ataon’ny Institut pasteur
Efa niverina amin’ny laoniny nanomboka omaly ny fampianarana eo anivon’ilay lisea iray nahitana vovo-javatra nanempotra mpianatra miisa 14 tany amin’ny distrikan’Arivonimamo ka voatery nampidirina hopitaly ireto farany.
OPENFLEX Nanome fiofanana momba ny varotra mahomby
Taorian’ny teny Expo Forello Tanjombato dia nanofana olona teny amin’ny Iscam Ankadifotsy indray omaly Atoa Simon Lee, tompon’andraikitra eo anivon’ny Ong Stileex Numafri sy ny Openflex.
Rovan’Ilafy Tsy namidy izany, hoy ny Ben’ny tanàna
Nitondra fanazavana mikasika ilay resabe miely momba ny Rovan’Ilafy omaly ny ben’ny tanànan’Ankadikely Atoa Andriamanganoro Georges.
Fiahiana ara-tsosialin’ny mpiasa DRH maromaro nofanin’ny CNaPS
Notanterahina nanomboka androany, ary hifarana rahampitso alarobia 11 aprily ny fiofanana nomen’ny CNaPS ho an’ireo mpiasan’ny orinasa miankina na tsy miankina. Tetsy amin’ny “groupe Axian” Andraharo no nanaovana izany, ary ity farany rahateo no nanatona ny CNaPS satria te – hahalala ny zon’izy ireo.